August 2020 – Gulled Salah
Guddiga doorashooyinka ayaa maanta kulan is-xogwareysi ah la yeeshay hogaamiyayaasha iyo xoghayayaasha guud ee 10ka Urur Siyaasadeed ee Puntland.
Guddiga kmg ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta kulan is-xogwareysi ah kula yeeshay xarunta PDRC hogaamiyayaasha iyo xoghayayaasha guud ee 10ka Urur Siyaasadeed ee Puntland. Guddoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre ayaa warbixin guud siiyey madaxda Ururada oo uu ku wargaliyey in kulankan bishiiba ay mar isugu imaan doonaan Guddiga doorashada iyo madaxda Ururada Siyaasadda.Shirka waxaa la …
Guddiga doorashooyinka ayaa maanta kulan is-xogwareysi ah la yeeshay hogaamiyayaasha iyo xoghayayaasha guud ee 10ka Urur Siyaasadeed ee Puntland. Read More »
Gudoomiyaha Gudddiga doorashooyinka ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah usoo xiray dhamaan ururada siyaasada Puntland.
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre ayaa soo xirayAqoon iswaydaarsi ay kaso qayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee Ururada Siyaasada Puntland kaas oo ka qabsoomay Xarunta Cilmibaarista PDRC. Aqoon isweydaarsigaan oo soconayay laba bari ayaa ku saabsanaa fahamka barnaamijka xisbiyada badan, shuruucda iyo habraacyada diyaarsan iyo guud ahaan hirgalinta hannaanka xisbiyada badan …
Gudoomiyaha Gudddiga doorashooyinka ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah usoo xiray dhamaan ururada siyaasada Puntland. Read More »
Gudddiga doorashooyinka ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah u qabtay dhamaan ururada siyaasada Puntland.
Gudiga KMG Doorashooyinka Puntland ayaa xarunta Cilmibaarista PDRC saaka kulan aqoon isweydaarsi ah oo soconaya 2 maalmood ugu qabtay dhamaan ururada siyaasada Puntland. Aqoon isweydaarsigaan oo soconaya laba bari ayaa ku saabsan fahamka barnaamijka xisbiyada badan, shuruucda iyo habraacyada diyaarsan iyo guud ahaan hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland. https://www.facebook.com/TPECPuntland/videos/726755158106004 CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Xaflada Shahaado siinta Ururada Siyaasada Puntland.
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland Guuleed Saaalax Barre, ayaa gudoon siiyay shahaadooyinkii rasmiga ahaa ee ururada ka qayb-gali doona doorashooyinka golaha deegaanka Puntland oo lafilayo in ay dhacdo octoobar 2021. https://www.facebook.com/TPECPuntland/videos/2729815597294941 CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.